RW ROGANE oo la kulmay Safiirro oo ku jiro midka Qatar | KEYDMEDIA ONLINE
6 May 2021 Maxaad ka taqaan taliyaha ciidanka Lugta Biixi?
6 May 2021 Maxaa laga yiri heshiiskii laga gaaray qalalaasihii Muqdisho?
6 May 2021 Dib u dhac ku yimid Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga sare
RW ROGANE oo la kulmay Safiirro oo ku jiro midka Qatar
Kulankan ayaa imaanaya xili Xukuumadda Rogane ay ku fashilantay hirgelinta heshiiskii doorashadda Sep 17, 2020, kaasoo Villa Somalia qodobadiisa jebisay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rogane ayaa Maanta xafiiskiisa ku qaabilay Danjireyaasha dalalka Turkiga iyo Qatar Mohmet Yelmez iyo Hassan Hamza oo ay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labada dal kala dhexeeya Soomaaliya.
Kulanka wuxuu kusoo beegmayaa xili DF ay dalbatay dhawaan Malaayiin dollar oo ay ku qabato doorashadda, aan heshiiska lagu ahayn, oo hanaankeeda Farmaajo afduubay.
Turkiga ayaa lacag toos ah siiyay Sanad kasta, taasoo lagu qiyaasay 2 illaa 3 milyan oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda Federaalka, oo mudadii ay joogtay xafiiska awoodi waysay inay shaqaale qorato.
Qatar ayaa saameyn ku leh siyaasadda dowladda Farmaajo, maadaama ay iyadu bixiyay lacagtii uu doorashadda ku galaya 2017, iyadoo Villa Somalia u fadhiya Fahad Yaasiin, oo dalka ku maamula rabitaanka Doha.
Maxay ka wada hadleen RW Rooble iyo Safiirka dalka Turkiga?
Warar 7 May 2021 9:41
Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaha Soomaaliya, Rooble, iyo Safiirka dalka Turkiga, Mahmet Yilmez, ayaa kulan gaar ah ku yeeshay Madaxtooyada Soomaaliya.
CC Warsame: Waa in la xaddido awoodahada hay’adaha Dawladda
Warar 7 May 2021 8:52
Amiirka Qatar oo qadka Taleefonka kula hadlay Farmaajo iyo Uhuru
Warar 7 May 2021 0:14
Ciidanka Badbaado Qaran oo laga saarey difaacyadooda
Warar 6 May 2021 21:28